Fitaovam Pitaterana China Manufacturers & Suppliers & Factory
Fitaovam Pitaterana - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 13 vokatra ho an'ny Fitaovam Pitaterana)
Fitaovam-pitaterana fanamafisana ny fiarovana amin'ny alàlan'ny telefaonina
Fitaovam-pitaterana fanamafisana ny fiarovana amin'ny alàlan'ny telefaonina [ Sarintan-tsarobidy ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana...
Fitaovam-piofanana matin'ny fanamafisana ny lanjany optika
Fitaovam-piofanana matin'ny fanamafisana ny lanjany optika [ Fanoroana ny solosaina manohitra ny solosaina ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana...
Fitaovam-pitaterana enti-mamono amin'ny rivotra
Fitaovam-pitaterana enti-mamono amin'ny rivotra Anarana simika: Perfluorohexene * Ny teboka fantson-drivotra ambany amin'ny fluorocarbon dia tena mampihetsi-po. Misy ny fiverimberenana eo amin'ny asa, izay manalavitra ny hafanana amin'ny firoboroboana, hany ka manome antoka fa ny fizotran'ny...
Fitaovam-pamokarana fluoride ho an'ny klimatizasiona
Fitaovam-pamokarana fluoride ho an'ny klimatizasiona Anarana simika: Perfluorohexene Fanafarana entona: Ity vokatra maromaro ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifany. Fanangonana sy fitaterana entana: Ity fivarotana arifomba ity dia mora tahiry sy fitaterana. Ny toetra mampiavaka ny dielectric : *...
Fitaovam-pitaterana ranom-panafody ho an'ny mpandika lalàna
Fitaovam-pitaterana ranom-panafody ho an'ny mpandika lalàna Ny fanamafisana ny famokarana hafanana ny mpanamory fiaramanidina, tsara dielectric hery 55kv, Ny tsy fahampian'ny entona simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny hafanana samihafa fanamafisana ny hafanana. Ny toetra mampiavaka ny dielectric : *...
Fitaovam Pitaterana Fitaovam-pitaterana Fitaovam-pitaterana enti-manitra Fiara fitaterana hoditra Fiarovan-tena Fitaovana anatiny Fitaovana fampitana herinaratra Famaritana fitaratra vera